ikhaya » iindaba » Cinga uXhishino loNxibelelwano ukuhambisa i-IP-based playout eMedias du Sud / VIA
Cinga uXhishino loNxibelelwano ukuhambisa i-IP-based playout eMedias du Sud / VIA
Isisombululo SokuSungula I-Cloud-Unified Unitying Scheduling sinikezela ukuguquguquka nokusebenza kakuhle kwe-20
AMSTERDAM, Sept.13, 2017 - Cinga uXhagamshelwano, ukuxhobisa i-media kunye nokuzonwabisa ngokutsha kwindlela entsha yokuguquguquka, ikhethwe nguMedias du Sud eFransi ukuxhasa i-initiative ekhangele phambili ebizwa nge-VIA eya kubeka isiseko sokuqala kweqela leziteshi zeTV eFransi. Kwisigaba sokuqala, i-Médias du SUD / i-VIA iya kunika iziteshi zethelevishini zakwa-20, zihambisa umxholo wendawo kwindawo ephakathi yedatha yokudlala. Ukuthunyelwa kwe-IP kusekelwe kukuncedisa umqhubi waseFransi ekufikelelekeni kumanqanaba amashishini okusebenza ngokucwangcisa ukuthembeka nokuxhomekeka kwemisebenzi yokusasaza kwendabuko kunye nokuguquguquka kunye nobuchule bokusebenza ngokufanelekileyo, kwisixhobo seendaba esichazwe kwi-software.
Kwintliziyo yesakhiwo esitsha ngumdlalo wokudibanisa kunye nesicombululo sokuhlela i-Versio ™, Cinga uXhagamshelwanoInkqubo yokudlala i-cloud-native-system, kunye ne-xG iShedyuli, isicwangciso sokuqala esisekelwe kwifayile kunye nokucwangcisa inkqubo ye-linear, kwi-demand and platforms. I-Nexio® mCAPTURE ™ ilawula i-IP ingakumbi ekuncedeni ukuhamba komsebenzi wokurekhoda. Ukuthunyelwa kweziko leenkcukacha ezizimeleyo kuxhaswa ngesisombululo esisekelwe kwi-microservices ukusuka kwi-Imaginec ejongene nokucwangciswa kwamagqabantshintshi kunye nokuhamba kwaye kunceda ukuqinisekisa ukuthobela ngokuthe ngqo kwimilinganiselo esemgangathweni ngokubonelela ukuvumelanisa impawu kunye nezinye iinkonzo. Ukufakela kwakhona kuxhomekeke kwi-EPIC ™ MV yokujonga iindawo zokubeka iliso.
"Ukuqalisa iziteshi zethelevishini zeVIA sifuna iqabane lobuchwepheshe elinokuxhasa ukuqonda kwethu okunzulu kwiinkqubo ze-IT kwaye ziphakamise izicombululo eziphambili," kusho uPhilippine Van de Velde, uMlawuli wezobugcisa eMedias du Sud / VIA. "UCinga uXhagamshelwano ibonise ukuba inokutshata umgangatho wokusasazwa kunye nokuthembeka ngeteknoloji ebonakalayo kunye nokunxibelelana kwe-IP, kwaye, mhlawumbi kubaluleke kakhulu, kunokuyihambisa ngokukhawuleza. "
Izithuba ezine zokuqala, ezisebenza kwi-Occitanie yeSithili eMzantsi waseFransi, zicwangciselwe ukuba zibe emoyeni ngoSeptemba 2017, kunye nezinye izitishi ze-20 eziyingxenye yesigaba sokuqala esiza kukhishwa ngaphantsi komnyaka . Le projekthi yaqalwa ngo-Agasti 2017. Izicwangciso zibiza umnxibelelwano ekugqibeleni ukwandisa ukufikelela kwizikhululo ze-30, zonke eziqhutywe kwiziko elifanayo leenkcukacha.
Ukuhlanganiswa ngokuqinile kokucwangcisa kunye nokulayishwa kwendlela yokudlala, ukusuka kumzila wesuka ukuya kwindawo ekhuselekileyo yokuhanjiswa, kubandakanywa ukusabalalisa phezulu, ukunceda iinkampani zoshishino ukuba zithuthukise ukusebenza kakuhle ngelixa zandisa amathuba okufumana imali. Ukuchithwa kwemisebenzi yezoshishino kunye neyokudlala kuyakwenza lula ukwenza imisebenzi ngokuzenzekelayo imigaqo yezoshishino, ekhupha isidingo sokulungiswa kwishedyuli yeencwadi kunye nokunceda ukuhlawula iziganeko zee-alarms zamanga kwi-suite control control, ukuvumela iMédias du Sud / VIA ukuba igxile kwikhwalithi yevidiyo kunye nezinye iinkxalabo zomoya.
"Siyakuvuyela ukuphumelela esi sikontraki, kuba kubonakaliswe ngokucacileyo kwimeko esenze ngayo iminyaka ngoku," kutsho uMatas Eckert, umongameli we-EMEA Cinga uXhagamshelwano. "Le nto epheleleyo, echazwe kwesoftware, i-IP yendalo, ukubonelela ngeenkonzo ezinamandla kakhulu, ezivelisayo kunye neenkonzo eziphezulu-ukubonakalisa ngokucacileyo ukuba ubuchule kunye ne-IP asisekho iiprojekthi zesayensi, kodwa ubugcisa bobugcisa obuqhelekileyo."
I-Versio, inikwe amandla yi-Zenium ™, isisombululo sokuqala senkampani ye-cloud-native, isisombululo se-microservice esekelwe kwi-IP ecocekileyo, iindawo ze-geo-ezazisasazekayo-kodwa nazo ziyachithwa kwizinto ezisekelwe kwisakhiwo-usebenzisa i-trade-off-shelf (i-COTS ) kwiihadi. I-EPIC MV i-multiviewer, iphinde ixhaswe yi-Zenium, I-Imagine ye-microservice yecuperformic, iyakwazi ukukhawuleza ukuhlangabezana neemfuno zokubeka esweni esona sikhulu kunye nesincomeko.
Cinga uXhagamshelwano iya kubonisa ukuCwangciswa kweSunyuli yokuHlanganisa kunye kunye nezicwangciso zezobugcisa kwizakhiwo ze-IBC2017 (Stand 4.A01).
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Cinga uXhagamshelwano ukudityaniswa Media du Sud IMKM Marcomms yokudlala ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-09-13
Previous: I-FilmLight ikhupha i-Baselight 5.0 phambi kwe-IBC2017
next: I-Viaccess-Orca Partners kunye ne-Hi-Global Technology kwiBhokisi eXhasayo yoLwazi lweTV oluxhunyiwe
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Cinga ukuXhintana ukuthumela i-IP-based playout eMedias du Sud / VIA". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/imagine-components-to-deliver-virtualised-ip-based-play-for-medias-du-sudvia/. Enkosi.